Shiinaha Shaqo beerta suufka jilicsan iyo warshad qoob-ka-ciyaare iyo alaab-qeybiyeyaal. AoFeiTe
Feature:Daryeelka Caafimaadka, Neefsasho Raxmad leh Si Xor Ah
Waxyaabaha:Polyester, Lycra Fabric (naylon / caag)
Nooca:Kooxda Taageerada Jilibka ee Kubadda Koleyga
Midabka:Madow Caddaan Casaan Casaan Jaale Buluug ah
Magaca Product:Kooxda Taageerada Jilibka ee Kubadda Koleyga
Shahaadada:CE, FDA, ISO9001, ISO13485
Shaqada Trouser Suunka Jilibka Beerta iyo Qoob-ka-ciyaarka
Ku shaqee suufka jilibka Waxay ku siisaa taageero patella, Raaxo leh in la xidho, Naqshad jilicsan oo afar-gees ah saamayn kuma yeelan doonto dhaqdhaqaaqaaga. Cadaadiska wanaagsan wuxuu ka dhigi karaa jilibkaaga inuu daboolo gabi ahaanba dabacsanaanta iyo adkeysiga maalin kasta. Jilibka suufka beerta. Copper wuxuu leeyahay astaamo fangas iyo antibacterial awood badan. Copper sidoo kale waa cunsur muhiim u ah shaqada caadiga ah ee unugyo fara badan waana lama huraan jiilka cusub ee maqaarka maqaarka. Maqaarka dadku uma nugul yahay naxaasta iyo halista falcelinno aan fiicnayn oo ay ugu wacan tahay soo-gaadhista maqaarka ee naxaasta oo aad u hooseysa. Jilibka suufka dheesha. Hadda ka dib 40 jeer oo dharka la dhaqay, laakiin sidoo kale la ilaaliyo nuxurka naxaasta ee 4000ppm, tan waxaa xaqiijinaya ITS. Iyo warbixinta baaritaanka maadada iyo natiijada ka hortagga bakteeriyada ayaa ka badan 99,99%. Sii taageero muruqyada oo adkaada, xanuun iyo xanuun. Dardar galiso soo kabashada murqaha iyo kalagoysyada. Dharka ayaa si dhakhso leh u nuugaya qoyaanka si looga fogaado qallal iyo finan. Bakteeriyada iyo urta ladagaalanta.
Ma waxaad raadineysaa soo saare jilicsan oo jilicsan oo jilicsan? Waxaan haynaa xulasho ballaaran oo qiimo aad u fiican ah si aan kaaga caawino inaad hal-abuur yeelato. Dhammaan Beerta Jilbayaasha Jilibka ayaa tayo leh. Waxaan nahay Warshadda Asalka Shiinaha ee Jilibka Pad Dance. Haddii aad qabtid wax su'aal ah, fadlan si xor ah u nala soo xiriir.
Custom xxxl jilibka taageerada gacmo-qabashada gacmo-qabsiga
jilbaha taageerada jilbaha oo lagu xiro xargaha isboortiga
Ilaaliyaha la tuuri karo ee jilibka jumlada u hiiliya
Double Magic warqad dhejis ah oo jilib tayo sare leh leh